China Pet Dog Nnukwu Mpaghara Mpịakọta Mpịakọta Poop Picker ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | MiaSein
Aha aha: Pet Dog Nnukwu Mpịakọta Mpịakọta Poop Picker
Nkọwa:Ejiji ejiji, ejiji ihe nchebe gburugburu ebe obibi, nkwụsị oxidation, nkwụsị corrosion. Na njikwa, dị mma maka onye ọbịa ka ọ buru
Ojiji: mgbe ị na-eji ya, jiri akwụkwọ ahụ kpuchie elu poop ahụ, wee jiri ụlọ mposi were ya ma tụfuo ya. Ma ọ bụ jiri eriri mkpofu ahịhịa ọzọ e rere n'ahịa iji kpuchie ime ụlọ mposi wee jide ya n'ala. Ọ dị mma, ịdị ọcha na enweghị nchekasị. Okwesiri maka iji ulo na njem.
Uru: ọ dị mma ka onye nwe ya kpochaa nsị nke nkịta. Enwere ike iwepụta ya ngwa ngwa site na iji akwa mpempe akwụkwọ. Mgbe enweghị ebe mkpofu ahịhịa, enwere ike ịchekwa nsị na igbe ahụ nwa oge, nke na-agaghị efu ma ọ nweghị uto. Ọ dị ọcha ma dị ọcha, aka ndị nwe ya enweghịkwa ihe jikọrọ ya na nsị anụ ụlọ. Enwere ike dochie akwa nhicha akwụkwọ ma ọ bụ akpa rọba.
Agba: Royal acha anụnụ anụnụ, nwa
Size （in cm ： Ogologo: 60cm, clip: 13.5 * 12.5 * 10cm, aka obosara: 12.5cm
Njirimara: Hichaa anụ ụlọ gị
Usoro ịsa: itucha na mmiri na akọrọ, Biko ọcha dị iche iche. Ejila ihe ndị mmadụ asa mmadụ
Usoro nchekwa: Chekwaa ebe dị mma na nkụ. Biko chekwaa ya iche, ọ bụghị ngwaahịa mmadụ
Biko rịba ama: Ngwaahịa a haziri ma mepụta naanị site na ụlọ ọrụ anyị. Ngwaahịa a anaghị akwado nhazi. Biko tufuo nsị anụ ụlọ ahụ n'ime ájá n'oge. Emebila ihe mebiri emezi, biko rụtụ aka na ezigbo ihe. Biko sachaa ma chekwaa dịka usoro ịsa na usoro nchekwa. Biko akụkwala ngwaahịa ahụ nke ọma iji zere imebi ngwaahịa a. Ọ bụrụ na afọghị afọ ojuju na ngwaahịa a, biko kpọtụrụ ndị ahịa.
Nke gara aga: Pet Cat Simple Disc Cool na Funny Cat Table Pet Cat Kitten Cat Okenye Cat Okpute Ezumike Okpuru Obere Ntanetị Cat Isiokwu Toy
Osote: Gbagharị Ejegharị Ejiri Ejiri na Oriọna Maka Ndị Agadi
Pet Uwe Nnukwu Nkịta Dog Mgbụsị akwụkwọ na Uwe oyi
New Anti iyi egwu nwoke Dog Physiological ude ...
Nnukwu Dog Akwa Labrador Ọkara Mebere Nnukwu Dog ...